Eeg Soo Saaraha Sheen-Xirfadlaha Camera Zoom - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Soo Saarida Qalabka Module Kaamirada Fogeeya
Waxaan haynaa in kabadan 10+ Sano oo Fogaynaysa Kaamirada Xayeysiinta
Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd. waa shirkad soo saarta kambiyuutarka xayeysiinta weyn. Hadafkeenu waa inaan noqono shirkada ugu horeysa ee soo saare kaamerada qalabka wax lagu dhejiyo.
Aragtida Sheen Technology waxaa la aasaasay sanadkii 2016 waxayna heshay shahaado shirkad heer sare ah ee farsamada casriga ah ee 2018. Shaqaalaha muhiimka ah ee R&D waxay ka yimaadeen shirkadaha caanka ah ee warshadaha, khibradooda celceliska ahna waa in ka badan 10 sano.
Aragtida Sheen Teknolojiyaddu waxay horumarisaa teknoolojiyadaha udub-dhexaadka u ah maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga, farsamaynta muuqaalka fiidiyowga, xakameynta mootada Khadka alaabtu wuxuu daboolayaa dhammaan taxanaha alaabooyinka u dhexeeya 3x ilaa 90x, Full HD ilaa Ultra HD, udhaxayn heer caadi ah illaa heer sare oo fog, wuxuuna u fidaayaa qaybaha kuleylka ee shabakada, kuwaas oo si weyn loogu adeegsado UAV, ilaalinta iyo amniga, dabka, raadinta iyo samatabbixinta, badda iyo berriga, iyo codsiyada kale ee warshadaha. Tiro ka mid ah wax soo saarka iyo teknoolojiyada ayaa helay shatiyadaha qaranka iyo xuquuqda nuqullada softiweerka, waxayna leeyihiin oggolaansho CE, FCC iyo RoHS.
Eeg alaabada Sheen Technology waxay u adeegtaa suuqyo toosan oo kaladuwan oo daboolaya in kabadan 20 dal iyo in kabadan 100 macaamiil ah. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo taageerta farsamada si aan u hubino jawaabaha degdegga ah ee baahida wada-hawlgalayaasha.
Iyadoo la raacayo, shirkaddu waxay siisaa adeeg xirfad leh OEM iyo ODM si ay ula kulanto shuruudaha suuqyada kala duwan. Dhowrkii sano ee la soo dhaafey, View Sheen waxay sii qoto dheereysey aqoonteeda iyo khibradeeda la kulanka baahida macaamiisha ee suuqyada toosan ee kala duwan.
Waxaan haynaa 4 faa iidooyin
1. Kooxda xirfadeed: Xubnaha muhiimka ah ee kooxda R & D waxay ka yimaadeen ganacsiyo caan ah, celcelis ahaanna 10 sano oo khibrad R&D ah. Waxaan haynaa qoto dheer oo ku saabsan AF algorithm, farsamaynta muuqaalka fiidiyowga, gudbinta shabakada, codeynta fiidiyowga, xakamaynta tayada, iwm
2. Diirad saarid: Ku hawlan cilmi baaris iyo horumarin, soo saarida kamaradaha zoomka in ka badan 10 sano.
3.Fahmitaan: Khadadka wax soo saarku wuxuu daboolayaa dhammaan taxanaha alaabooyinka oo u dhexeeya 3x ilaa 90x, 1080P ilaa 4K, baaxad caadi ah oo dheellitiran illaa fog fog illaa 1200mm.
4. Hubinta tayada: Habka wax soo saar jaango'an oo dhameystiran iyo xakamaynta tayada ayaa hubineysa kalsoonida wax soo saarka.